Ngwa iji gbochie oku achọghị na android | Akụkọ akụrụngwa
Ngwa 5 iji gbochie oku achọghị na gam akporo
Site na ekwentị ndị ochie na site na aghụghọ ole na ole, ị ga-enweta ya igbochi oku mbata site na ụfọdụ nọmba kọntaktị, ihe ga-adabere tumadi na ọrụ ndị kwuru ọnụ nwere ọnụ. Ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka ekwentị mkpanaaka gam akporo, uru ya na uru ya kwesịrị ịdị ukwuu, ọ bụ ezie na ị ga-ama otu esi ahọrọ ngwa ziri ezi iji nyere anyị aka n'ọrụ a dị mkpa.
Nsogbu a nwere ike ibute mgbe onye ọrụ natara oku ekwentị na ozi SMS nke metụtara telemarketing, ihe ekwesịrị ịtụle dị ka ọrụ spam ebe ọ bụ na anyị onwe anyị arịọghị ụdị ozi a. Maka otu n'ime ikpe abụọ ahụ, n'isiokwu a, anyị ga-akwado iji ngwa gam akporo ole na ole ị nwere ike ibudata na Playlọ Ahịa Google ma nke ahụ ga-enwe ebumnobi nke igbochi oku ekwentị ndị a achọghị.
1 1. Maazị Nọmba
2 2. NQ Blocker oku
3 3. Kpọọ Oku - Blocker Oku
4 4. Oku Blacklist
5 5. OnyeKpọọ
1. Maazị Nọmba
Nke a bụ nke mbụ android ngwa na anyị ga-akwado maka oge ahụ; ọ nwere ohere nke igbochi ma oku ekwentị na-abata na ozi SMS, nke a na-ekwu na ọ ga-abịa site na ekwentị ahịa a nke anyị kwuru na mbụ. Dabere na onye ọrụ ekwentị ọ bụla, ngwa ahụ ga-enwe ohere nke ikọọrọ ụlọ ọrụ ndị megoro ụdịrị oku ekwentị a.
Ọbụghị naanị na a ga-egbochi oku ekwentị nke na-esite na telemarketing, kamakwa site na ụfọdụ ndị anyị ga-amata nke ọma yana onye anyị agaghị achọ ịnata oku. Onye ọrụ ahụ nwere ohere ịnweta oku ahụ, kwụgidere ya (ịjụ ya) ma ọ bụ naanị ka echekwara ya na igbe ozi olu.
2. NQ Blocker oku
Ọ bụrụ n’ịchọghị ngwa gara aga maka ụfọdụ ihe kpatara ya, anyị nwere gị ọzọ ọzọ ọzọ; onye anyị na-ekwu banyere ya n’oge a nwere ikike nke inwe ike igbochi ọnụ ọgụgụ ụfọdụ nke oku ekwentị na ngwaọrụ mkpanaka gam akporo, na-enyere ibe ha aka ịmepụta ndepụta ojii, nke onye ọrụ nke njedebe ga-emepụta.
Dị ka ngwa ngwa, oge ọ bụla oku biara na ị chọghị ịza ya, enwere ike ịjụ ya na, sjiri ozi SMS akpaka zaa. Ngwa gam akporo a nwekwara ikike igbochi ederede ederede SMS nke enwere ike iwere spam. Site na nhazi nke ngwá ọrụ ahụ, ịnwere ike ihichapụ akụkọ ihe mere eme nke oku na-abata na ngwa ngwa ndị a jụrụ.
3. Kpọọ Oku - Blocker Oku
Dabere na ọtụtụ akụkọ, nke a bụ android ngwa a na-ejikarị ya ugbu a, ịbụ ihe atụ nke ndị ọrụ nde 5 a kpebiri iji ya igbochi ma oku, SMS ozi ederede.
Onye nwe ekwentị mkpanaka nwere ike ime ka ọnụ, kpọọ naanị mgbe ọ chọrọ; Enwekwara ike igbochi otu obodo dum, nke enwere ike ịchọpụta, dị ka nke na-eziga ozi mgbasa ozi n'ọtụtụ. N'okpuru ọnọdụ a, ngwa gam akporo ga-enwe ohere iji gbochie ọtụtụ puku mmadụ ozugbo, na-edekọ ha niile dịka ndị bidoro spam.
4. Oku Blacklist
Elydabere na ọkachamara pụrụ iche, a android ngwa nwere ikike igbochi ma SMS ozi ma oku achọghị.
Na mgbakwunye ịdabere a 'blacklist' nke kọntaktị igbochi, ngwa a gakwa enyere gi aka ime otu ihe ahu ngọngọ ya na onye obula so na ndepụta gi ma ichoro. Oge ọ bụla oku ekwentị na-abịa site na kọntaktị ọ bụla dị na ndepụta ojii, ekwentị mkpanaaka agaghị ada ụda, a na-ahụghị oku a, ya mere, anaghị aga ya n'oge ọ bụla.
Itzọ o si arụ ọrụ a android ngwa ọ bụ ihe na-atọ ụtọ nke ukwuu, ebe ọ dabere na njikọta Ntanetị ya. Mgbe oku batara (nke kwekọrọ n'ụdị ụfọdụ nke telemarketing), otu ga-enyocha ya ozugbo na weebụ, na-eme ka a gbochie ya n'oge ahụ ma ọ bụrụ na amatala ya dị ka ọrụ spam.
Onye ọ bụla nwere ekwentị nke edebanyere aha na ngwa a (dị ka spam) nwere ike nyochaa ya ọ bụla. kpebie ma ịlaghachi oku.
Site na usoro 5 ndị ​​ọzọ anyị kwuru, ị ga-enwerịrị ohere ịmalite duru ndu dị jụụ na-enweghị ozi SMS na ịkpọ oku ekwentị spam, si otú a na-ezere wayo ekwentị nwere ike ịdakwasị taa n'ihi ụdị ọrụ a nke ụfọdụ ụlọ ọrụ nwere obere ntụkwasị obi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Ngwa 5 iji gbochie oku achọghị na gam akporo
Oku ojii dijo
Ndewo, Site na Pamiesolutions anyị na-eweta Blacklistcall: ngwa ebe ị ga-enwe ntọala igbochi etiti ma ị nwere ike igbochi ọnụ ọgụgụ ma mechie ha na akpaghị aka. O nwekwara akpaka igbochi na-egbochi nọmba ndị ọrụ ndị ọzọ achọpụtala dị ka ọnya SPAM. Wụnye ya n'efu na: https://play.google.com/store/apps/details?id=pamiesolutions.blacklistcall
Zaghachi na Blacklistcall
Etu aga-esi nweta foto ehichapụ na mberede na gam akporo